Rosia: Mitantara Ny Kolikoly Ao Amin’ny Sampam-Pampianarana Ny Asa Fanaovan-gazety Ao Mosko Ireo Mpitoraka Bilaogy · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Daniel Alan Kennedy
Voadika ny 14 Aogositra 2011 3:42 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, русский
Ny misterin'ny adina am-bava
Tamin'ny 21 Jona 2011, nanao fanavaozan-dahatsoratra [ru] ny mpitoraka bilaogy malaza Vladimir Varfolomeev ka ao anatin'izany no iresahany ny fanadinana fidirana ho an'ireo olona izay miezaka ny ho tafiditra ao amin'ny sampam-pampianarana ny asa fanaovan-gazety ao amin'ny MGU. Tsy mpampianatra mpiasam-panjakana ao amin'ny MGU i Varfolomeev. Mpamoaka vaovao vao haingana no niasa ao amina trano fampielezam-peo Ekho Moskvy izy, fa nanao fihaonana ho fanasàna mpanao gazety tsy miankina hanatrika ny fivoriana izay mitondra ho any amin'ny fanadinana adina am-bava hidirana ao amin'ny sampam-pampianarana ny asa fanaovan-gazety ry zareo ao amin'ny Fakiolten'ny Asa Fanaovana gazety. Ka nahitàna ny tranga hoe raha tsy sady mpanao gazety i Varfolomeev no mpitoraka bilaogy malaza dia mety tsy ho nitranga ity tantara rehetra ity ary mety tsy niseho ny rariny.
Ny sampam-pampianarana ny asa fanaovan-gazety ao amin'ny MGU. Loharano: Wikipedia
Raha nanoratra voalohany ity olana ity teo amin'ny bilaoginy i Varfolomeev , dia nilaza tsotra fotsiny ny ahiahiny sy ny tsy fahazoana ny toe-javatra manaraka toy izao izy: Fa naninona ny mpiadina iray, izay nadininy am-bava ary nahazo isa 30 avy amin'ny mpitsara, no nilatsaka tampoka ho 12 ny isa azony?
Naneho hevitra [ru] azo lazaina ho avy hatrany momba ilay fampidirana lahatsoratra ny Zokiolona ao amin'ny Sampam-pampianarana ny Asa Fanaovan-gazety, Yelena Vartanova. Milaza izy fa efa nisy ny “rafitra fijerena indray ny isa ambony sy ambany”, dingana izay mifanaraka amin'ny fepetra napetraky ny Ministeran'ny Fampianarana (ny No. 442 sy No. 285 no tondroin-dry zareo eto) ary efa nisy tao amin'ny Sampam-pampianarana ny Asa Fanaovan-gazety “ nandritra ny 30 taona”
Ny tiana ho lazaina dia hoe, rehefa mahazo naoty voamarika ambony na ambany ianao amin'ny adina am-bava ho an'ny Sampam-pampianarana ny Asa Fanaovan-gazety ao amin'ny MGU, dia mety mbola hhaverina hojerena indray io naotinao io. Tsy fantatra hoe iza indray no mijery azy ireo. Raha fantatra hoe iza avy ireo mpanadina ao amin'ny komity, dia tànana ho tsiambaratelo kosa ireo mandrafitra ny “mpijery indray ny naoty”. Tsy misy mahay hoe oviana ary aiza izany no atao, ary rehefa haseho ny eo amin'ny peta-drindrin'ny sampam-pampianarana ny valim-panadinana vao fantatry ny mpiadina ny naotiny farany.
Tamin'io andro io ihany izay nisehoan'ny lahatsoratr'i Varfolomeev voalohany, 21 Jona 2011, nisy fampidirana [ru] niseho tao amin'ny pejy Facebook-n'ny mpanao gazety iray avy amin'ny Slon.ru, i Natalya Falkon, izay nivoaka tao amin'ny Sampam-pampianarana ny Asa Fanaovan-gazety ao amin'ny MGU. Tantarainy amin'ny antsipiriany ao ny fomba niezahan'ny rahavaviny, Nastya, niditra tao amin'ilay sampam-pampianarana. Ao amin'ilay lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe ‘Henatra ho an'ny Sampam-pampianarana ny Asa Fanaovan-gazety’, nanoratra toy izao i Natalya :
Nilaza i Nastya fa tena nety tsara ny fanadinana am-bava, ary voavaliny daholo ny ankabeazan'ireo fanontaniana ary nilaza ireo mpikambana tao amin'ny komity nampanao ilay adina am-bava fa “tsara, fa mahay noho isika aza izy!” […] Tsara vintana i Nastya ary taty aoriana nifanena tamin'iray amin'ireo mpikambana tao amin'ny komity izay nilaza taminy fa tena nahay izy ary nahazo isa 30 […] Alaivo sary an-tsaina ny hatairany raha hitany teo akaikin'ny anarany ny isa 64 […] 52 ny isa azony tamin'ny fanadinana an-tsoratra, izay midika hoe 12 amin'ny 30 izany no azony tamin'ny adina am-bava.
Tsy tranga tokana ny nahazo an'i Nastya: andro vitsy taorian'izay, nampakatra vaovao [ru] mikasika ireo mpiadina hafa i Varfolomeev , fantatra amin'ny fiandohan'ny anarany fotsiny ihany, maneho fa ny isa azon'izy ireo tamin'ny adina am-bava – 30, 28 sy 18 – dia nivadika ho isa 2 daholo.
Mazava ho azy, tsara ny manamarika ny olan'ny fanomezana isa tsy miangatra. Ny zava-misy dia hoe tsy fombafomba fotsiny ny adina am-bava ary miankina betsaka amin'ny fepetra araky ny fihetseham-pon'ny mpanadina sy ny mpiadina. Lazaiko izany amin'ny maha-mpampianatra aty amin'ny anjerimanontolo ahy. Ny tanjon'ny adina am-bava dia ny hanehoana ny halalin'ny fifery avy any anatin'ny mpiadina any, ny manosika azy, ny mahaliana azy sy ny fironany. Azo ekena ihany koa fa mety misy ny fahadisoana.
Nanohana ny mpanao gazetiny ireo mpamoaka lahatsoratra ao amin'ny Ekho Moskvy ary nandray ilay lohahevitra. Voalohany, nanasa an'i Yelena Vartanova an-tsehatra [ru] izy ireo, izay mbola namerenan'ity farany indray fa “ao amin'ilay Sampam-pampianarana dia misy ny fanao eo amin'ny fijerena indray ny naoty ary tsy ny avo ihany fa koa ny ambany.”
Na izany aza, tsy nitanisa izany “fanao” izany ho voasoratra anaty baikon'ny Ministeran'ny Fampianarana i Vartanova, tahaka izay nolazainy tao amin'ny fanamarihany voalohany. Nanapa-kevitra noho izany ny mpanoratra Ekho Moskvy ny hanamarina [ru] ireto baiko ireto. Novakian'ny mpanoratra tsara araka izany ireo baiko, fa koa ireo antontan-taratasy maro hafa, na ny ‘Fitsipika amin'ny fidirana ao amin'ny MGU tamin'ny 2011‘ [ru] na ny fitsipika mifehy ny fifaninana famoronana [fanadinana fidirana ao amin'ny Sampam-pampianarana ny Asa Fanaovan-gazety ] [ru] ao amin'ny MGU.
Tsy misy na aiza na aiza hahitan'izy ireo fanamarihana amin'ny fijerena indray ny isa azo tamin'ny adina am-bava nataon'ny komitin'ireo lalim-pahaizana, na iza izany na iza. Vantany vao fantatra izany, dia nanoro hevitra [ru] na dia ireo mpanao gazety ao amin'ny trano fampielezam-peo aza, ny tonian'ny fanoratana ao amin'ny Ekho Moskvy, i Aleksei Venediktov, mba tsy handray anjara amin'ny adina hidirana ao amin'ny sampam-pampianarana raha mbola tsy mangarahara ny fitsipika ary fantatry ny mpiadina sy ny mpikambana ao amin'ny komity tsara.
Niteraka korontana araka izany ny toe-draharaha. Nanjary nivandravandra fa tsy nisy fototra ara-dalana mihitsy ny nanovàna ny isa nomen'ny komity tamin'ny adina am-bava. Nanjary nazava ihany koa fa nodisoina ny sasany tamin'ireo mpiadina ka mazava be fa tsy ho afaka ny hiditra ao amin'ilay Sampam-pampianarana noho ny vokatr'ity dingana ity, ary mamofona kolikoly ity resaka iray manontolo ity. Amin'ny ankapobeny, manaiky izany daholo ny olon-drehetra, fa ny trangan'ny MGU kosa, izay nanjary fantatry ny rehetra noho ny nataon'i Varfolomeev sy ny bilaoginy malaza, dia nahitana vahaolana tokana mazava: mila averina apetraka tsara ny lalàna, raha tsy izany dia tena ho ratsy jery be ihany ny lehiben'ilay sampam-pampianarana sy ny MGU.
Somary haingana be ihany no nifàran'ny tantara, tamin'iny andro iny ihany rehefa tsy maintsy namoaka ny isa azon'ireo kandida ny Sampam-pampianaran'ny Asa Fanaovan-gazety, ary miaraka amin'izay ny lisitr'ireo voaray. Nanao sonia ny fitsipika [ru] manafoana ireo isa novàna nataon'ny Sampam-pampianaran'ny Asa Fanaovan-gazety taorian'ny adina am-bava ny Rektoran'ny MGU, Viktor Sadovnichy, teo ambany fiahian'ny Komity Foiben'ny Fandraisana mpianatra.
Fandresena madio! Amiko dia mila mahatsiaro ny “asa mendrika” nataon'i Varfolomeev ireo rehetra tafiditra tao amin'ilay sampam-pampianarana tamin'ity taona ity. Na izany aza, tsy misy zavatra tena mampiavaka ity hetsika ity. Izany no fomba mahazatra efa fanaon'ny mpitoraka bilaogy Rosiana: manoratra mikasika ny tsy rariny, mamboraka ireo fanitsakitsahana ny zo, manadihady tranganà kolikoly, miaro ireo tsy verezin-jo sy ny osa, mitabataba, ary mangataka valinteny amin'ny manam-pahefana, ny mpiasam-panjakana sy ny mpitarika.
Araka ny fantatsika, mahazo valiny izany ka ny ohatra nomen’ i Varfolomeev sy ny Sampam-pampianaran'ny Asa Fanaovan-gazety ao amin'ny MGU no manamafy izany .
Tsetsatsetsa tsy aritra, tsy mifarana eto ny tantara. Tamin'ny 28 Jona, naneho antsipirihany hafa mifandray amin'ity tantara ity ny TV Channel 1. Tena niavaka tokoa izy tamin'izany, saingy mbola noho ny antony maro hafa ihany koa anefa. Nandritra ny resadresaka [ru], niaro ny voninahitry ny Sampam-pampianarana ny Filohan'ilay Sampam-pampianaran'ny Asa Fanaovan-gazety, Yasen Zasursky, ary nanindry fa tsy mora araka ny fahitàna azy ity resaka ity ary mety koa tsy manan fijery tsy miangatra ny mpikambana ao amin'ny komity :
Olombelona ny mpanao gazety, ary manana dadatoa, nenitoa, dadabe, bebe, zanaka sy zafikely. Tsy tiantsika ny mpanadina antsika, isan'izany ny mpanao gazetintsika, haneho amin-kery be loatra ny heviny.
Ny andro taorian'izay, teo amin'ny tsikeran'ny trano fampielezam-peo Svoboda, dia nasian'i Yasen Zasursky[ru] tota-boka manta be fotsiny hoe:
Omen'izy ireo [mpanao gazety] isa avo ireo tonga ao aminy, indrindra ireo zanaky ny olom-pantany […] Isika tsy maintsy mampiditra ny mpanao gazety ho ao amin'ny asan'ny komity, izay, tsy mpampianatra matihanina akory, mijery izany ho asa fanampiny tsy maintsy atao, mihevitra fa afaka manampy ny olona tsara hianatra hiaraka amintsika. Niteny avy hatrany tamin'ireny ankizy ireny ry zareo hoe “nomenay isa ambony daholo ianareo”. Fa inona nefa no vita? Isika aloha mazava ho azy tsy maintsy handefa eritreritra amin'ny hoe ahoana, ary iza no hamnpidirintsika amin'ny fifaninana famoronana.
Niteraka ady hevitra mafana [ru] teo amin'ny bilaogin'i Varfolomeev ny tsikeran'i Zasursky :
Oleg Kozlovksy – Vladimir, mety hoe miafina anay ianareo fa mety te hiditra ao amin'ny Fakiolten'ny Asa Fanaovan-gazety ny nenitoanareo?!’
Vladimir Varfolomeev – mbola matotra kokoa noho izany izy ity, na dia eo aza ny fanakanana rehetra, dia tapa-kevitra ny hirotsaka ihany koa ny dadabeko.
Iza no inoanao kokoa: Varfolomeev sa Zasursky?